Usebenzise ithuba edilizwa
UNKSZ Mpume Kunene uthi akulula ukuba wusomabhizinisi kodwa kudingeka umuntu osebenza ngokuzikhandla. Isiithombe: SITHUNYELWE
BONISWA MOHALE | March 27, 2020
UKUDILIZWA emsebenzini kumsizile ukuthi agxile ebhizinisini ayelisungule ngo-2009 ukwengeza imali, uNksz Mpume Kunene (35).
Le ntokazi yaseDonnybrook enenkampani yokuhlanza ebizwa ngeClean Spot Solutions, itshele Isolezwe ukuthi yadilizwa emsebenzini ngo-2012 lapho yayisebenza kwezokukhangisa nokudayisa.
“Ngangingenaso isipiliyoni emkhakheni wokuhlanza, ngangingazitsheli ukuthi ngizogcina ngiwusomabhizinisi ngokugcwele kodwa kwakuyinto engiyenza eceleni. Ngazinika izinyanga eziyisithupha ngagcina sengilithanda leli bhizinisi,” kusho uNksz Kunene.
Uveze ukuthi emuva kokudilizwa wathola omunye umsebenzi kodwa umqashi wakhe omusha wamholela inyanga eyodwa, kweyesibili wahluleka ukumholela.
“Umholo wami wenyanga yesibili ngawuthola eClean Spot, emuva kwalokho ngabona ukuthi kumele ngigxile ebhizinisini. Ngo-2013 ngiqale ngisebenza ngedwa, bengihlanza, ngibhale amabhuku ngenza konke. Ngangingenayo ngisho imoto yize umsebenzi omningi wawudinga ukuthi ngihambise izinto zokuhlanza namathishu. Ngangingenayo ngisho imali yokuqasha imoto,” kusho uNksz Kunene.
Uthe kunomngani wakhe owayemdayisela ithishu, owamtshela ngohlelo lokuqeqeshwa kwa-Engen-Raizcorp lokusiza osomabhizinisi abancane.
“Ngangena kulolu hlelo lwaka-Engen-Raizcorp, lwangisiza ukungifundisa ukuphatha imali njengosomabhizinisi. Ngingene kulona ngizisebenzela ngedwa ebhizinisini kodwa manje senginabasebenzi abawu-56 nemali engiyenzayo isingcono manje. Ngihlale ngifuna amathuba ebhizinisi ngoba inhloso yami wukusuka kuhulumeni ngisebenze nezinkampani ezizimele,” kusho uNksz Kunene.
Uthe abakwa-Engen bamsizile kakhulu ngesikhathi eqala ngoba bebeyikhasimende lakhe futhi namanje baseyilona.
“Bangixhumanise nezinye izinkampani, okubalwa kwaToyota lapho ngisebenza khona. I-Raizcorp nayo ingisizile ngoba ngaphandle kwayo ngabe angikwazi ukuphatha imali nokuzethemba njengosomabhizinisi,” kusho uNksz Kunene.
Ugqugquzele osomabhizinisi ukuthi bangene emikhakheni abayithandayo, ukuze bakwazi ukubekezela uma bebhekana nezingqinamba.
Okumsizile wukubhekana nezingqinamba zakhe, ubalule ukubhekana nazo ngqo nokulalela izimfundiso zakwaRaizcorp nokuthi angadikibali uma kungahambi kahle ebhizinisini.
Uthe akuzange kube nzima ukugxila ebhizinisini ngoba wayediliziwe emsebenzini, kwakufanele athole enye indlela yokwenza imali.
Kwabesifazane abafuna ukungena ebhizinisini, uNksz Kunene uthe abangajahi ukushiya umsebenzi ngoba befuna imali esheshayo kodwa benze ucwaningo bese bengena emkhakheni abawuthandayo.
“Akulula ukuba wusomabhizinisi, awunaso isikhathi sokungena nesokuphuma. Awubi nempilo yangasese ngoba uhlala usebenza. Kufanele wazi konke okwenzeka ebhizinisi lakho. Ube nezinhlelo zezinyanga eziyisithupha nezonyaka. Mina angishadile kodwa nginendodakazi ngakho bekunzima ukubhekela umsebenzi nomndeni. Kodwa ukuqasha abantu kungisizile,” kusho uNksz Kunene.